Kooxda Al-Shabaab oo kordhisay weerarada ka dhanka ah Kenya | KEYDMEDIA ONLINE
Kooxda Al-Shabaab ayaa sare u qaadday weerarada ka dhan ka ah Kenya, waxayna todobaadkaan labo weerar oo kala duwan ka fuliyeen gobolka Waqooyi Bari ee dalkaas.
NAIROBI, Kenya – Kooxda Al-Shabaab ayaa Saddex qof oo rayad ah ku dishay Isniintii gobolka waqooyiga Kenya ee Mandheera, oo xuduud la leh dalka Soomaaliya.
Sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ah, oo soo wareysatay booliska, Kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaadday degaan dhaca aagga Jabibar ee degmada Mandheera, halkaas oo uu ka socdo mashruuc lagu dhisayo waddada.
“Ugu yaraan seddex qof ayaa lagu dilay Isniintii weerar ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadday degaanka Jabibar, ee gobolka Mandheera”. Ayaa lagu yiri war ka soo baxay Booliiska Kenya.
Dhacdo kale oo taas ka duwan, Al-Shabaab waxa ay gubeen gaari xamuul ah ka dib markii ay afduubeen shaqaalihii ka shaqeynayay waddo dhismo ku socodo oo ku taal Koonfurta Mandheera.
Ku-xigeenka Gudoomiyaha Koonfurta Mandheera, Nyamboga Mounda, ayaa u sheegay warbaahinta maxaliga ah in booliisku ay baadi goobayaan kooxihii weerarka soo qaaday oo afduubay darawalkii gaariga la gubay Ali Mohamed iyo saaxiibkiis Kerow Adan Abdi
Sanadkii 2013, Kooxda Al-Shabab ayaa dishay ugu yaraan 67 qof afar maalmood oo ay Westgate Mall gacanta ku hayeen, halka ay mas'uul ka ahaayeen weerarkii lagu qaaday Jaamacadda Gaarisa ee Kenya sanadkii 2015, kaas oo lagu dilay in ka badan 140 arday.